Byton na-egosi ụgbọ ala eletrik ya nke ọdịnihu (ya na vidiyo) | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị etinye ọtụtụ ihe ọnụ na otu ngwaahịa, anyị ga-enwerịrị ngwaahịa gbara gburugburu. Byton, ụlọ ọrụ China nke amụrụ na CES 2018, gosipụtara ọhụụ ya maka ụgbọ ala nke ọdịnihu. Branddị a ewetawo echiche dịka: SUV, ụgbọ ala eletrik, ihu ihu na ọnụ ọnụ. Otú a ka amụrụ Byton SUV Concept.
Cargbọ ala a bụ ọhụụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ China nke chọrọ igosi onwe ya na ụwa na ngosipụta teknụzụ kachasị mkpa n'ụwa na nke na-emepe afọ ọhụrụ. Na Las Vegas, Byton na-egosi anyị ụgbọ ala ya zuru oke na nke nwere ọgụgụ isi nwere ezigbo mma. Echefula ihe ngosi vidiyo n'okpuru. Ga-ahụ n'anya:
Echiche Byton SUV bụ nnukwu ụgbọ ala (4,85 mita ogologo). Ya mere, anyị na-atụ anya nnukwu ụlọ ebe anyị nwere ike izu ike n'ụzọ zuru oke na njem ogologo. Dị ka e gosiri na mbụ oyiyi, SUV nwere 4 oche. N'ezie, ha niile dịka ị na-anọdụ ala na sofa n'ụlọ.
N'aka nke ọzọ, ihe ndị juru anyị anya na mpụga echiche a Byton: Enweghi enyo ma obu aka iji meghe ya. Nke a bụ ebe ụfọdụ teknụzụ na-amalite ịpụta. Nke mbụ, a na-eji enyo igwefoto dị n'akụkụ dochie enyo ndị ahụ ga-enye gị nnukwu nlele nke mpụga site na nnukwu ihuenyo na dashboard nke anyị ga-ekwu maka mgbe e mesịrị. Ugbu a, olee otu ụgbọ ala Byton a ga-emeghe? Anyị ga-enwe ya na windo nke ọnụ ụzọ dị n'ihu ese foto maka ọdịdị ihu. Nke a agaghị eme ka ịnweta ụgbọ ala naanị, mana site na ịmata onye ọrụ niile ntọala (oche, sterịn, wdg) ga-edebe ka eburu ha n'isi.
N'aka nke ọzọ, n'ime ihe niile ka a ga-ejikwa ya site na nnukwu ihuenyo etiti nwere ọdụ dashboard niile. Bụ ihuenyo mmetụ bụ 49 sentimita asatọ ọ ga-enye anyị ụdị ozi niile: site na arụmọrụ moto (eletriki) na ozi ịntanetị.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ụgbọ ala eletrik zuru oke. Mana iji mee ka obi dajụọ gị, ụlọ ọrụ ahụ kwuru nke ahụ nnwere onwe ya ga-abụ narị kilomita anọ na otu ụgwọ Tdị ụgbọ ala a na-abawanye ọchịchị obodo nke ukwu. Ọ bụ ezie na ọnụahịa mmalite abụghị oke ọnụ: $ 45.000 (ihe dị ka 37.500 euro mgbanwe ugbu a). Otú ọ dị, ụgbọ ala a bụ nanị echiche, ọ bụ ezie na anyị amaghị ma ọ bụrụ na site na ụdị a, anyị ga-ahụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ zuru oke maka ọrịre na obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Byton na-egosi ụgbọ ala eletrik ya nke ọdịnihu (ya na vidiyo)
Sony na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na OLED na TV ya 2018